Madaxweynaha maamulka Somaliland Muuse Biixi Cabdi oo ka hadlayey munaasabad lagu xusay 25 guuradii aas aaska ciidamada Somaliland, ayaa sheegay in guuldaradii Dr. Cali Ciise Cabdi ka soo gaadhay Garoowe ay tusaale u tahay sida aan loo wada lahayn deegaanadaas iyo Soomaaliya oo dhan.
Muuse waxa uu ka hadlayey collaada Tukaraq oo uu ku sheegay in Madaxweynihii hore ee Puntland Cabdiweli Gaas abaabulkeeda lahaa, Waxa uu tusaale u soo qaatay Dr. Cali Ciise, Professer Axmed Ismaaciil Samatar, Professor Cali Khaliif Galaydh iyo Ismaaciil Hurre Buubaa oo dhammaan ku soo hungoobay hankoodii syaasadeed ee Koonfur, Waxa uu sheegay in reer Puntland ay si xun ula dhaqmeen Dr. Cali Ciise, una muujiyeen inuusan ka mid ahayn reerkaas.
“Doorashadii lagu galaayey Garoowe waxaa isu soo sharraxay raga Soomaali ugu aqoon weyn mid ka mid ah Somaliland-na hormuudkeedii iyo aqoonteedii ugu horreeyey nasiib darro haddii ay tahay xuduud beeleed baan sameysanayaa dee ninka Somaliland, Laascaanood ka yimi waxa uu ahaa in uu tartanka ka qeyb galo oo wax laga siiyo in la yiraahdo Soomaaliya matihid ee Somalilander baad tahay dib ugu noqo dee mey ahayn intaas baa noogu filan caqliyadda taala Koonfur.”
Guuldaraddii Dr. Cali Ciise ka soo gaadhtay doorashadii Puntland oo ahayd mid la sii saadaalin karay ayaa dadka qaar rumeysan yihiin inay sii fogeysay shacabka Sool Sanaag iyo Cayn oo qaarkood diidan ka mid ahaanshaha Puntland.
waxan oran kara shekada ku sabsan masharaxa cali ciise cabdi oo kuguul dareystay Dorashadii puntland ka dhacday 8/1/2019 sida laga warqabo waxa isu so tagay 30 musharax 1 nin aya gushu ku racday,Dadka ku hadaqaya cali ciise cabdi puntlandar ma’ah oo uu ugu horeyo madaxweynaha somaliland muuse biixi cabdi,mr.muuse hadad nin wax garada tahay sidaas uma adan hadashen,mida kale 17 Xildhiban oo Besha dhulbahante ah wax coda masiin,meshuna waxa ka muqata Dorasho xor ah nin kastana waxuu dortay qofkii uu rabey taas qofkii dood ka qaba wa qof khaldan noc kasta ha’ahade.
Shacabka Sool, Sanaag iyo Cayn; sida Majeerteen Reer-Sheikh Isaxaaq iyo dhammaan dawlada goboleed ku sheegyada kale ee Soomaaliya ay u goosteen una magacaabeen deegaan daaqooda waa in ay dawlad dagmeed sameystaan. Marka ugu horeysa waa inay Reer-Sheikh Isaxaaq deegaan daaqooda ka soo ceshadaan, ka dibna dawlad goboleed sameystaan. Reer-Sheikh Isaxaaqow hoos uga daga fakradda Ingriis baa dhul noo cayinay. Ingriisku isagaa dhulka qabsaday ee Gudubiirsay, Reer-Sheikh Isaxaq, Warsangali iyo Dhulbahane toona uma qaban.